पाकिस्तानको २६/११ मुम्बई आतंकवादी हमलाको नालीबेली, यसरी दिइरहेको छ आतंकवादलाई संरक्षणNepalpana - Nepal's Digital Online
नेपाल पाना मंसिर १० २०७८
एजेन्सी । भारतको मुम्बईमा श्रृंखलाबद्ध आतंकवादी हमलाको आज १३ वर्ष पुगेको छ । पाकिस्तानी चरमपन्थी आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबाका १० लडाकुले चार दिनसम्म मुम्बईका पाँच स्थानबाट श्रृंखलाबद्ध बिस्फोट तथा अन्धाधुन्ध गोली फायरिङ गर्दा थुप्रै नागरिक मारिए । पाकिस्तानी सरकारको संरक्षणमा लश्करले पुरै दुनियाँलाई स्तब्ध बनाउने गरी २६ नोभेम्बर २००८ मा भारतीयमात्र होइन विदेशी पर्यटकको पनि हत्या गर्यो । अमेरिकी, बेलायती, इजरायलीलगायत २५ विदेशी पर्यटकलाई गोली हानेर मारे । हमलामा १४० भारतीय पनि मारिए ।
मुम्बई हमलापछि लश्कर-ए-तैयबा पाकिस्तानकै ठूलो जिहादी समूहमा केन्द्रीत भयो । सन् २००२ देखि पाकिस्तानी सरकारले काल्पनिक रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको भएता पनि, लश्करले कुनै पनि आधिकारिक हस्तक्षेप बिना कोष जुटाउने जुलुसहरू र लडाकु भर्ती केन्द्रहरू सञ्चालन गर्यो । त्यतिमात्र होएन पूर्वपाकिस्तानी सेना एसडब्लूएटी अपरेटरको सल्लाहमा यसले दक्षिण एशियामा आत्मघाती सामूहिक-हताहत हमलाहरूको अवधारणा अघि सारयो । तर, भारतमा लश्कर-ए-तैयबाको अघिल्ला आक्रमणभन्दा २६/११ को हमला दुईवटा सन्दर्भमा फरक थियो ।
पहिलो, २६/११ आक्रमणले पश्चिमी नागरिकहरू, साथै भारतीय नागरिकहरूलाई निशाना बनाएको थियो । यसले सुनिश्चित गर्‍यो कि 'भारतीय नागरिकहरूलाई मात्र निशाना बनाएका विगतका आक्रमणहरूको तुलनामा यसपालि आतंकवादी लडाकुको वास्तविक पहिचान पत्ता लगाउन धेरै विश्वव्यापी चासो हुनेछ । दोस्रो, अघिल्लो आक्रमणहरूमा, लश्कर-ए-तैयबाका बन्दुकधारीहरूले एउटै स्थानमा आक्रमण गरेका थिए र मृत्युसम्म लडेका थिए । यद्यपि, एक आक्रमणकारीले समयमै आफूलाई ब्यारिकेड गर्न सकेनन् । उनी हिँडिरहेको बेला स्थानीय प्रहरीहरूले उनलाई आक्रमण गरे र यस क्रममा उनीहरूका एक सहकर्मीलाई गुमाए । अजमल कसाब नामको यो बन्दुकधारीको गिरफ्तारी खेल परिवर्तन गर्ने थियो । भारतले पहिलो पटक आत्मघाती हमलामा संलग्न व्यक्तिलाई उच्च सोधपुछसहित पक्राउ गर्यो ।
मुम्बई प्रहरीका एक अधिकारी प्रशान्त मर्देले कसाबलाई तुरुन्तै सोधपुछ गरे । बन्दुकधारीले सहरमा अन्य नौ जना बन्दुकधारीहरू रहेको पुष्टि गर्दै सबै पाकिस्तानी नागरिक भएको बताए । यी खुलासाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावहरूबारे सचेत भारत सरकारले अमेरिकी फेडरल ब्यूरो अफ इन्भेस्टिगेसन (एफबीआई)लाई कसाबसँग प्रत्यक्ष रूपमा सोधपुछ गर्न अनुमति दियो । एफबीआई अधिकारीहरूको टोली न्यूयोर्कबाट आक्रमणको बारेमा के हुन सक्छ भनेर जान्नको लागि उडेको थियो ।
कसाबले स्वतन्त्र रूपमा एफबीआईलाई पुष्टि गरे कि उनले भारतीय पुलिसलाई पाकिस्तानी नागरिक र लश्करको सदस्य भएको बताएका थिए र मोबाइल र इन्टरनेट टेलिफोनमार्फत पाकिस्तानी बन्दरगाह सहर कराचीबाट वास्तविक समयमा हमला निर्देशित गरिएको थियो । मुम्बईमा रहेका बन्दुकधारीलाई कराँचीका नियन्त्रकहरूसँग जोड्ने यो डिजिटल ट्रेल महत्त्वपूर्ण साबित भयो ।
यससँगै इस्लामाबादमा पश्चिमी गुप्तचर अधिकारीहरूले पाकिस्तानको इन्टर-सर्भिसेज इन्टेलिजेन्स (आईएसआई) को विश्लेषण प्रमुखसँग भेट गरे । पुलित्जर पुरस्कार विजेता पत्रकार स्टीव कोलकाअनुसार जसले आफ्नो पुस्तक डाइरेक्टरेट एसमा आतंकवादसँग पाकिस्तानी सम्बन्धहरू नजिकबाट खोलतेका थिए, आईएसआई अधिकारीले मुम्बईमा बन्दुकधारीहरूलाई निर्देशन दिने सेवा गर्ने एजेन्सी अपरेटिभहरूको अवरोधको सामना गर्नुपरेको थियो । त्यसपछिका दिनहरूमा आधिकारिक पाकिस्तानी प्रतिक्रिया विरोधाभासहरूको बन्डल थियो । कूटनीतिक स्तरमा, इस्लामाबादले आक्रमणपछिको अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने वाचा गर्दै पाकिस्तानी क्षेत्रसँगको कुनै पनि सम्बन्ध प्रमाणित नभएको कुरामा जोड दियो । यद्यपि, स्थानीय स्तरमा, पाकिस्तान र विशेष गरी लश्कर-ए-तैयबातर्फ जाने स्पष्ट ट्रेल मेटाउने प्रयासहरू भइरहेका छन् । त्यतिखेर पनि, यो प्रतिक्रियाले पूर्वपाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज शरीफको आलोचना गरेको थियो । झण्डै दश वर्षपछि, शरीफले मुम्बई पीडितहरूलाई न्याय दिन पाकिस्तानको असफलताले विश्वव्यापी रूपमा आफ्नो विश्वसनीयता घटाएको बताए ।
जुन २००१ मा, पाकिस्तानी वर्तमान मामिला पत्रिका न्युजलाइनले एउटा रिपोर्ट प्रकाशित गर्‍यो जसमा सुरक्षा वा 'एस' विंग भनेर चिनिने आईएसआईको एक शाखालाई घरेलु आतंकवादलाई उक्साएको आरोप लगाइएको थियो । प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ कि १९८८/९९ को लोकतान्त्रिक अन्तरालमा, जब नागरिक प्रधानमन्त्रीहरूले देशमा शासन गरे, सेनाद्वारा संचालित आईएसआईले उनीहरूलाई बदनाम गर्न इस्लामवादी प्रोक्सीहरू प्रयोग गरेको थियो । एजेन्सीभित्रका तत्वहरूले ३० सेप्टेम्बर १९८८ मा हैदरावाद सहरमा सिन्धी चरमपन्थीहरूले गरेको नरसंहारको इन्जिनियरिङ गरेको आशंका लामो समयदेखि भइरहेको थियो । १५ मिनेटमा करिब २५० मानिसहरूलाई गोली हानेर मारिएको थियो, जसमा अधिकांश अल्पसंख्यक मुहाजिर समुदायका थिए । भोलिपल्ट, कराँचीका मुहाजिरहरूले निर्दोष सिन्धीहरूविरुद्ध बदला लिए, नागरिक र राजनीतिज्ञहरूको सैन्य शासनको बिरूद्ध संयुक्त मोर्चा गठन गर्ने प्रयासलाई भंग गरे ।
पछिल्ला दशकभरि, अफवाहहरू जारी रह्यो कि आईएसआईले मुख्य धारका राजनीतिक दलहरूभित्रबाट अलग भएका गुटहरूलाई समर्थन गर्यो, उनीहरूलाई एकअर्कालाई लक्षित गर्न बन्दुकहरू उपलब्ध गराए । यी अफवाहहरूलाई कहिलेकाहीं पाकिस्तान भित्रका अन्य सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूले समर्थन गरेका थिए ।
पाकिस्तानमा सन् १९८८ मा भएको हैदराबाद नरसंहार र त्यसको दुई दशकपछि मुम्बईमा भएको हमलाबीच समानता छ । दुबै अवस्थामा, सुटरहरूको घुमाउरो टोलीले सार्वजनिक स्थानहरूमा नागरिकहरूलाई घाँटी थिचे । दुवै घटनामा अपराधीहरू सजायबाट जोगिए । हैदराबाद हत्याकाण्डका संदिग्ध मास्टरमाइन्ड, कादिर मग्सी नामका एक सिन्धी राजनीतिज्ञले २०१७ मा सफाइ पाएका थिए । मुम्बई मामिलाका मुख्य संदिग्ध, लश्करका सैन्य प्रमुख जाकी उर रहमान लख्वी, २०१४ मा अदालती मुद्दा पछि जमानत पाएका थिए जसमा अभियोजक र कम्तीमा एक न्यायाधीशलाई ज्यान मार्ने धम्कीपछि केही अन्तर्राष्ट्रिय छानबिनहरू आईएसआईले आतंकवादी समूहहरूलाई गरेको कथित समर्थनमा केन्द्रित भएको थियो । २००६ मा बढ्दो शंकाको बारेमा सचेत, एजेन्सीले पश्चिमी समकक्षीहरूसँग सम्पर्क गर्न काउन्टर-टेररिज्म सेल सिर्जना गर्यो । अमेरिकी विद्वान स्टीफन ट्याङ्केलले सुझाव दिएका छन् कि 'एस' विंगले आइएसआई-सीटी भनिने यो नयाँ सेलको साथ क्रस-उद्देश्यमा सञ्चालन गरेको छ ।
आइएसआई-सीटी प्राविधिक रूपमा पाकिस्तानमा आतंकवाद विरोधी प्रयासहरूको लागि जिम्मेवार निर्देशनालय थियो । किनभने यो संयुक्त राज्य अमेरिकाको आदेशमा गठन गरिएको थियो र सीआईएको पैसाबाट फण्डिङ भएको थियो, तथापि, आइएसआई-सीटीलाई पाकिस्तानी सुरक्षा प्रतिष्ठानभित्र एक बाह्य प्रायोजित मिसनको रूपमा बुझिएको थियो । वास्तवमा, आइएसआई-सीटीको सीमित जनादेश छ कि सेवाको अधिक शक्तिशाली बाह्य सुरक्षा शाखा (आइएसआई-एस), जो पाकिस्तान बाहिर खुफिया र सुरक्षा कार्यहरू निर्देशन गर्न जिम्मेवार छ, र यस क्षमतामा, आतंकवादी पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्दछ । नतिजाको रूपमा, यसको स्थापनादेखि, आइएसआई-सीटीलाई सीमित गरिएको छ र बारम्बार आइएसआई-एस द्वारा कम गरिएको छ ।
केही पश्चिमी विश्लेषकहरूले स्पष्ट रूपमा 'एस' विंगलाई अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादको प्रायोजकको रूपमा पहिचान गरेका छन् । जे होस्, आइएसआई एक खुफिया मोनोलिथ हो भन्ने तथ्यको कारणले, यसको आन्तरिक कार्य पनि छ, एजेन्सीलाई एकै साथ विदेशी र स्वदेशी दुवै अपरेशनहरूको लागि जिम्मेवार छ । यसको मतलब यो हो कि पाकिस्तान भित्र घरेलु उग्रवादलाई क्यालिब्रेट गर्न, र आवश्यक पर्दा अतिरिक्त हिंसालाई विदेशी लक्ष्यहरूतर्फ मोड्न यो अद्वितीय रूपमा अवस्थित छ । पाकिस्तानका दिवंगत आन्तरिक मन्त्री नसिरुल्लाह बाबरले स्वीकार गरेअनुसार सन् १९९० को दशकको प्रारम्भदेखि नै घरेलु सुरक्षाको संरक्षणका लागि इस्लामावादको मुख्य नीतिगत औजार बनेको छ ।
जबसम्म दक्षिण एसियामा सीमापार आतंकवादको शिकार अफगान र भारतीय नागरिक थिए, पश्चिमा सरकारहरूले आतंकवादको यो विशिष्ट रूपमा ध्यान केन्द्रित गरेको देखिएन । यद्यपि यो परिवर्तन भयो, अमेरिका र यसका नाटो सहयोगीहरूले अफगानिस्तानमा आक्रमण गरेपछि २००९ को न्यूयोर्क टाइम्सको लेखले देशमा अमेरिकी सेनाहरूमाथि आक्रमणहरूलाई समर्थन गर्न 'एस' विंगको भूमिका वर्णन गरेको छ । लेखमा भनिएको छ कि उनको समर्थनमा पैसा, सैन्य आपूर्ति र तालिबान कमाण्डरहरूलाई रणनीतिक योजना निर्देशन समावेश छ ।' यस विवरणसँग मेल खान्छ जुन आईएसआईले कश्मीरमा लडिरहेका पाकिस्तानी लडाकुहरूलाई उपलब्ध गराएको लामो समयदेखि रिपोर्ट गरिएको छ ।
डेभिड हेडली (दाउद गिलानी) भनिने पाकिस्तानी-अमेरिकी जिहादीलाई मुम्बई शैलीको योजनाको लागि अक्टोबर २००९ मा गिरफ्तार गरिएको थियो । अमेरिकी हिरासतमा रहँदा, उनले आफू पाकिस्तानमा अपराधी अन्डरवर्ल्ड घुसाउने काममा खटिएको अमेरिकी ड्रग इन्फोर्समेन्ट एजेन्सीको एक सूचनादाता भएको दाबी गरे । पछिल्ला देशको उनको यात्राले उनलाई आईएसआईको ध्यानमा ल्याएको थियो, जसले उनलाई लश्कर-ए-तैयबामा पठाएको थियो, त्यसपछि हेडलीलाई लश्कर-ए-तैयबाका लागि एक टोही एजेन्टको रूपमा काम गरिएको देखिन्छ, उनले पाठ्यक्रममा मुम्बईको धेरै यात्राहरू गरे । तीन वर्षको, २००६ मा सुरु भयो र २६/११ आक्रमण पछि सम्म जारी रह्यो । यो उनको सोही भिडियो र फोटोहरुको कारण थियो कि लस्करले एक सटीक स्ट्राइकको लागि योजना र अभ्यास गर्न सक्षम भयो ।
अमेरिकी अदालतमा हेडलीले दिएको बयान अनुसार उनलाई आईएसआईले गुप्तचर सङ्कलन गर्ने प्रविधिको तालिम दिएको थियो । उनले पाकिस्तानी प्रायोजकहरूबाट प्राप्त गरेको २९,५०० डलरमध्ये २८,५०० डलर एक सेवारत आईएसआई अधिकारीबाट आएको थियो । अमेरिकी अदालतको कागजातमा 'मेजर इकबाल' भनेर चिनिने यो अफिसर अमेरिकी सरकारले आतंकवादको अभियोग लगाउने पहिलो पाकिस्तानी गुप्तचर अपरेटिभ बनेको छ । बाँकी रकम साजिद माजिद (अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया रिपोर्टहरूमा 'साजिद मिर' भनेर चिनिन्छ) नामक लश्कर अपरेटिभबाट हेडलीलाई आयो । माजिद लश्करको बाह्य परिचालन विभागका उपप्रमुख थिए र विश्वभरका जिहादीहरूलाई ह्यान्डल गर्थे । सन् २००८ सम्ममा उनको नाम युरोप, अमेरिका र अष्ट्रेलियामा आतंकवादी योजनामा जोडिएको थियो । पश्चिमी जिहादीहरूको वयानले उनलाई लश्करमा एक उच्च प्रभावशाली व्यक्तित्वको रूपमा चित्रण गर्‍यो । हेडलीले मुम्बईको अपरेसनमा मजिदले समन्वय गरेको बताएको छ । उनले मुम्बईमा आक्रमण गर्ने दश बन्दुकधारीलाई पाकिस्तानी सेनाको विशेष बलका पूर्वसदस्यहरूले तालिम लिएका थिए, जसले पाकिस्तानी पत्रकारिता अनुसन्धानले पत्ता लगाएको कुरालाई पुष्टि गर्ने दाबी गरे । लश्करलाई पेशेवर सिपाहीहरूले सल्लाह दिइरहेका थिए ।
अमेरिकी सरकारले हेडलीलाई अमेरिकी भूमिमा दोषी ठहर गरेको थियो तर उनलाई भारत सुपुर्दगी गर्न अस्वीकार गरेको थियो । नयाँ दिल्लीका केही अधिकारीहरूले शंका गर्छन् कि वाशिंगटनले आइएसआईसँगको आफ्नो कमजोर सम्बन्धलाई जोगाउन खोजेको छ, यदि हेडलीले २६/११ मा आएसआई संलग्नताको थप विवरणहरू खुलासा गरेमा क्षतिग्रस्त हुनेछ । यी अधिकारीहरूले शंका गर्छन् कि अमेरिकी गुप्तचर समुदायले हेडलीको मुम्बईमा लस्करका लागि काम गरेको बारे थाहा थियो तर 'उसले ओसामा बिन लादेनलाई पत्ता लगाउन मद्दत गर्न सक्छ भन्ने आशामा यसलाई बेवास्ता गर्यो । चाखलाग्दो कुरा के छ भने, उनलाई एजेन्टको रूपमा चलाएको वर्षहरूमा पनि, लस्करले हेडलीलाई एक अमेरिकी जासूसको रूपमा हेर्दै अल-कायदामा घुसपैठ गर्न पठाएको थियो तर जसलाई भारतमा लक्ष्यहरू पुन: पत्ता लगाउन संपार्श्विक रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
अन्ततः, अमेरिकाले भारतीय अन्वेषकहरूलाई हेडलीसँग सोधपुछ गर्न अनुमति दियो, जसले दाबी गर्यो आइएसआईलाई भारतमा प्रहार गर्नुपर्ने आवश्यकता बुझ्नमा कुनै अस्पष्टता थिएन । यसले अनिवार्य रूपमा तीनवटा उद्देश्यहरू पूरा गर्नेछ । तिनीहरू (क) कश्मीरमा आधारित संगठनहरूमा विभाजन नियन्त्रण गर्दै छन् (ख) उनीहरूलाई उपलब्धिको भावना प्रदान गर्दै र (ग) पाकिस्तानको घरेलु भूमिबाट भारतमा हिंसाको रंगमञ्च सार्न र न्यूनीकरण गर्दै ।
हेडलीको सोधपुछ नहुँदासम्म, भारतीय अन्वेषकहरूले उद्देश्य पहिचान गर्न संघर्ष गरेका थिए । किन आइएसआई अधिकारीहरूले मुम्बईमा लश्कर आक्रमणलाई समर्थन गर्छन् जसले जानाजानी विदेशी पर्यटकहरूलाई मार्नेछ र इस्लामाबादमा अन्तर्राष्ट्रिय अपमान ल्याउनेछ? सन् २००७–२००८ मा हेडलीले दाबी गरेका थिए । लश्करले आन्तरिक द्वन्द्वको सामना गरिरहेको थियो किनकि युवा कार्यकर्ताहरू आईएसआईको अधीनमा रहेको अन्तर्राष्ट्रीय कारणले समूहबाट अलग हुन चाहन्थे। लश्करलाई एक गुटमुनि एकताबद्ध राख्नको लागि । केही 'एस' विंगका अपरेटिभहरूले नेतृत्वको व्यवस्था गरेको देखिन्छ, केही भारत विरुद्धको आक्रमण जसले पाकिस्तानी जिहादी समुदायमा लश्कर-ए-तोयबाको सम्मान कमाउने र थप विचलनलाई रोक्न सक्छ । आक्रमणले तेस्रो देशका नागरिकहरूलाई लक्षित गर्नेछ किनभने त्यसो गर्दा उपलब्धि बढाउँछ । यसबाहेक, हत्या भारतीय भूमिमा हुने भएकोले, पाकिस्तानसँग कुनै स्पष्ट लिङ्क हुनेछैन । इस्लामाबादलाई आक्रमणबाट जोड्नको लागि आवश्यक सबै कुरा आक्रमणकारीहरूले मृत्युसम्म लड्ने कुरा सुनिश्चित गर्नु थियो । बन्दुकधारीहरूलाई टेलिफोनमार्फत नियन्त्रण गर्नु सम्भवतः यस सन्दर्भमा उनीहरूको मनोबल बढाउने उद्देश्य थियो । २६ नोभेम्बर २००८ को राति मुम्बई पुलिसले अजमल कसाबलाई अप्रत्याशित रूपमा पक्रने योजनाले यसको मुख्य सम्पत्ति - अस्वीकार्यता लुट्यो । कसाबले पाकिस्तानमा बन्दुकधारीहरूले गरेको प्रशिक्षण प्रक्रियाको विवरण उपलब्ध गराए । अर्को सफलता ११ महिनापछि हेडलीको गिरफ्तारी थियो। अन्ततः मे २०१२ मा, साउदी अरेबियाका अधिकारीहरूले एक व्यक्तिलाई भारत सुपुर्दगी गरे जसले पनि प्रदान गर्यो मुम्बई आक्रमणको थप विवरण । यो जबिउद्दीन अन्सारी, एक भारतीय जिहादी थिए जो २००६ मा पाकिस्तान भागेका थिए । मुम्बई योजनाको परिचालन विवरणमा लश्करले विश्वास नगरे पनि, उनी साजिद माजिदको नजिक थिए ।
उनले एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य दस बन्दुकधारीहरूलाई सामान्य हिन्दी वाक्यांशहरू सिकाउने गरे । उनीहरुले आक्रमणका बेला भारतीय टेलिभिजन समाचार च्यानलहरुलाई टेलिफोन गरेर राजनीतिक बयान दिने सोच थियो । मुम्बई-विशिष्ट अपशब्दको प्रयोगले, श्रोताहरूलाई उनीहरूको वास्तविक राष्ट्रियताको रूपमा भ्रमित पार्ने र उनीहरूलाई घर-बढाएको देखाउने आशा गरे । अन्सारीले मुम्बईमा प्रयोग भएका हतियार र गोलाबारुद आइएसआईले उपलब्ध गराएको दाबी पनि गरेका छन् । वास्तवमा, उनले भने कि आक्रमणको समयमा आइएसआई अधिकारीहरू कराँचीको लस्कर कन्ट्रोल रुममा उपस्थित थिए । अन्सारीले यस सम्बन्धमा पहिचान गरेका एक आईएसआई अफिसर मेजर समीर अली थिए, जसलाई हेडलीले आईएसआई अफिसरको रूपमा पनि नाम दिएका थिए जसले उनलाई पहिले लश्करमा पठाए ।
डिसेम्बर २००८ मा, पश्चिमी साझेदारहरूले उपलब्ध गराएको जानकारीमा कार्य गर्दै, पाकिस्तानको संघीय अनुसन्धान एजेन्सी (एफआईए) का अधिकारीहरूले लस्कर शिविरहरूमा छापा मारे । जबिउद्दीन अन्सारीले पछि सुझाव दिए कि मुख्य योजनाकारहरू, जसमध्ये साजिद माजिद, आईएसआई अधिकारीहरूको सल्लाहमा गिरफ्तारीबाट भागेका थिए । छापा मारेर लईटीका सात जना अपरेटिभहरू मारिए, जसमध्ये जाकी उर रहमान लख्वी थिए, जसको आवाज मुम्बईमा बन्दुकधारीहरूलाई निर्देशन दिने टेलिफोनिक अवरोधहरूमा सुनिएको थियो ।
३ अगस्ट २०१५ मा, मुम्बई अनुसन्धानको पाकिस्तानी पक्षको पर्यवेक्षण गर्ने पूर्वएफआईए प्रमुख तारिक खोसाले देशको सबैभन्दा ठूलो अङ्ग्रेजी अखबार डनमा एउटा लेख प्रकाशित गरे । उनको लेखले आईएसआई, मेजर समीर अली, मेजर इकबाल र साजिद माजिदको उल्लेख गर्न छाड्यो । तर दशजना बन्दुकधारी लश्कर-ए तैयबाका सदस्य थिए, सिन्ध प्रान्तको एउटा शिविरबाट उनीहरूको तालिमको फोरेन्सिक प्रमाण प्राप्त भएको थियो, कराचीमा उनीहरूको नियन्त्रण कक्ष रहेको थियो, र जहाज जहाजमा भएको थियो भनी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । उनीहरुलाई भारतीय जलक्षेत्रमा पुर्याएको एफआईएले नियन्त्रणमा लिएको थियो । यो लेख लेख्दा खोसाको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । सायद यही अनुमान गर्दै, एक पेशेवर प्रहरी अधिकारीको रूपमा, खोसाले निम्न अवलोकन गरे: पाकिस्तानले आफ्नो माटोबाट नियोजित र प्रक्षेपित मुम्बई हत्याको सामना गर्नुपर्छ । यसका लागि सत्यताको सामना गरी गल्ती स्वीकार गर्न आवश्यक छ । राज्यको सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्रले भयानक आतंककारी हमलाका दोषी र मास्टरमाइन्डलाई कानुनको कठघरामा ल्याइने कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । मुद्दा लामो समयदेखि लम्किएको छ । प्रतिवादीहरूका द्वन्द्वपूर्ण कार्यनीति, मुद्दाका न्यायाधीशहरू बारम्बार परिवर्तन र मुद्दाका अभियोजकको हत्यालगायत केही प्रमुख साक्षीहरूको मौलिक बयानबाट पछि हट्नु अभियोजकहरूका लागि गम्भीर धक्काहरू हुन् ।
पाकिस्तानको एफआईएले मुम्बई हमलाका दोषीहरूलाई पत्ता लगाउन दृढ प्रारम्भिक प्रयास गरेको थियो, जसले खोसाद्वारा सूचीबद्ध सफलताहरू निम्त्यायो । तैपनि, मामलामा सबै प्रमुख घटनाक्रम पश्चिमी सुरक्षा एजेन्सीहरु वा भारतद्वारा साझा जानकारीद्वारा प्रेरित ‍थियो । जनवरी २००९ मा, नयाँ दिल्लीले मुम्बई आक्रमणको बारेमा इस्लामाबादलाई ६९ पृष्ठको डोजियर उपलब्ध गराएको थियो । डोजियरमा लस्कर नियन्त्रकहरूको ट्रान्सक्रिप्टहरू समावेश थिए, तीमध्ये साजिद माजिद, टेलिफोनमार्फत पश्चिमी बन्दीहरूको मृत्युदण्डको आदेश दिएका थिए । भारतले यो डोजियर अन्य १४ देशहरूमा पठायो । जसका नागरिकहरू आक्रमणमा मारिएका थिए । यसरी, डिसेम्बर २००८ देखि जनवरी २००९ सम्म, पाकिस्तानलाई आफ्नै अनुसन्धानमा प्रगति देखाउन कूटनीतिक दबाब बढ्दै थियो, जसका कारण एफआईएले पक्राउ गरेको हो ।
दबाब कम भएपछि इस्लामाबाद पछि हट्यो । धेरै न्यायाधीशहरू फेरबदल भए, जसका कारण अदालतको कारबाही असीमित रूपमा ढिलो भयो । खोसाले माथि उल्लेखित लेखमा उल्लेख गरेअनुसार अभियोजन पक्षका एकजना वकीलको २०१३ मा हत्या भएको थियो । केही पाकिस्तानी नागरिक टिप्पणीकारहरूले दावी गरेका छन् कि लश्करविरुद्ध इस्लामाबादको कार्यहरू समूहमा पश्चिमी चासोको स्तरसँग मेल खाने कोरियोग्राफ हुन् । तिनीहरू तर्क गर्छन् कि पाकिस्तानी सुरक्षा स्थापनाको प्राथमिकता अतिवादीहरूलाई लक्षित गर्नु होइन, बरु, आलोचना गर्नेहरूलाई चुप लगाउनु हो । अतिवादीविरुद्ध होइन सेनाले सक्रिय रूपमा घरेलु सुरक्षामा लोकप्रिय छलफलहरू चलाउन खोज्छ । नोभेम्बर २०१५ मा, मिडिया नेटवर्कहरूलाई लश्कर र यसको बढ्दो राजनीतिक गतिविधिहरूबारे रिपोर्ट गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । यसको स्पष्ट कारण इस्लामाबादले यूएनएससी प्रस्ताव १२६७ को पालना गरेको थियो तर पनि यो औचित्य थियो । अनौठो कुरा, २०१५ देखि, पाकिस्तानी राज्यले लस्कर वा यसको अगाडि संगठन जमात उद दावा (जेयूडी)लाई प्रतिबन्ध लगाएको थिएन । लस्करलाई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदले मे 2005 मा अल-कायदा-सम्बद्ध आतंकवादी संस्थाको रूपमा तोकेको थियो । र जेयूडी लाई पनि डिसेम्बर २००८ मा वर्गीकृत गरिएको थियो । मुम्बई पछि नौ वर्षसम्म, पाकिस्तानी विदेश कार्यालयले भ्रामक रूपमा दुई लस्कर र जमात संगठनात्मक पूर्वाधारलाई "प्रतिबन्धित" भनी वर्णन गरेको थियो । पाकिस्तानको प्रमुख वर्तमान मामिला पत्रिका, हेराल्ड द्वारा २००९ को खोजी रिपोर्टले खुलासा गर्यो कि जमात वास्तवमा कहिल्यै थिएन । सरकारको 'प्रतिबन्धित' सूचीमा राखिएको छ, संयुक्त राष्ट्र संघलाई देखाउन पाकिस्तानको विदेश कार्यालयले प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदले जमातलाई आतंकवादी संगठन तोकेको एक दिनपछि । तर यो घोषणाको देशभित्र कुनै कानुनी बल थिएन । जेयूडीलाई सरकारी 'वाच लिस्ट' मा राखिएको थियो र यस समूहका गतिविधिहरूलाई निगरानीमा राख्नु पर्ने आन्तरिक निर्देशन थियो । केवल फेब्रुअरी २०१८ मा, जब पाकिस्तानले फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (धनी देशहरूको समूह जसमा यसका धेरै सहायता दाताहरू समावेश छन्) द्वारा निन्दा हुने खतराको सामना गर्नुपर्‍यो, इस्लामाबादले आधिकारिक रूपमा जमातलाई प्रतिबन्ध लगायो ।
तैपनि, सबै कूटनीतिक दबाबको बाबजुद पनि इस्लामाबादले स्पष्ट रूपमा सबटरफ्यूजको सहारा लियो । यसले पुलिस बलहरूलाई जेयूडीको सम्पत्ति जफत गर्न निर्देशन दिएको थियो तर उनीहरूलाई पक्राउ गर्न अनुमति दिएन । यी जफतहरू, तथापि, यी स्थानहरूको सामान्य कामको निरीक्षण गर्न सरकारी कर्मचारीलाई पठाउने, तर तिनीहरूलाई बन्द गर्न होइन । तसर्थ, पाकिस्तानी राज्यले यस समूहको आधिकारिक प्रतिबन्ध लागू गरेको देखिएन । नोभेम्बर २०१८ सम्म, सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार, जमात फेरि प्रतिबन्धित संगठन थिएन, किनकि फेब्रुअरीमा लगाइएको प्रतिबन्धहरू समाप्त भएको थियो । फेब्रुअरी २०१९ मा, फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्सबाट नयाँ दबाबपछि, इस्लामाबादले फेरि एक पटक जमातमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गर्‍यो। प्रारम्भमा, यसले २०१८ को आफ्नो अघिल्लो रणनीतिलाई दोहोर्याउन खोज्यो (अर्थात् आधिकारिक रूपमा संगठनलाई प्रतिबन्धित गरिएको घोषणा गर्दा अभ्यासमा यसलाई निगरानी सूचीमा राखेर) । जे होस्, यस अवसरमा, भारतीय समाचारपत्रहरूले विसंगति औंल्याउन द्रुत रूपमा पाकिस्तानलाई सम्भावित रूपमा लज्जित पार्ने समय थियो जब अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान जमातमा केन्द्रित थियो । भारतीय मिडियाले जेयूडी अझै पाकिस्तानमा सक्रिय रहेको रिपोर्ट गरेको एक दिनपछि, इस्लामाबादले समूहलाई प्रतिबन्धित संगठनहरूको सूचीमा थप्यो ।
२००८ को मुम्बई हमलाले देखाएको छ कि ९/११ पछि पनि, आतंकवादीहरू अनिवार्य रूपमा मानव जाति (सबै मानवजातिको शत्रु) बन्न सकेनन् । कम्तिमा पनि, पाकिस्तानले आफ्नो क्षेत्रको आधारमा आतंकवादीहरू विरुद्ध कारबाही गर्न असंगत साबित गरेको छ, जुन युएनएससी १२६७ अनुसार बाध्यकारी दायित्व हो । यो आक्रमण खुला मामला हो, पाकिस्तानी राज्यको संलग्नता अझै पनि बहस-विवाद छ, तर लश्कर र व्यक्तिगत अधिकारीहरूको भूमिका आईएसआईलाई अहिले धेरैजसो त्रैमासिकमा गम्भीर विवादभन्दा बाहिरको रूपमा लिइन्छ । एउटा नीतिगत प्रश्न बाँकी छ: अर्को मुम्बईमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रतिक्रिया कस्तो हुनुपर्छ ? अमेरिकाले सन् १९८० को दशकमा गैर-आणविक शक्तिहरूद्वारा राज्य-प्रायोजित आतंकवादलाई रोक्नको लागि उपयुक्त उपकरणहरू खोज्न संघर्ष गरेको देख्दा, यो प्रश्नले आणविक दक्षिण एसियामा बढी सान्दर्भिकता मानेको छ । जहाँसम्म भारतको सवाल छ, उसले एकभन्दा बढी अवसरहरूमा संयम देखाएको छ, थोरै फाइदा हुन सकेन ।
हालै, बाइडेन प्रशासनले लस एन्जलसको संघीय अदालतलाई पाकिस्तानी मूलका क्यानाडाली व्यापारी तहव्वुर राणालाई भारतमा सुपुर्दगी गर्न आग्रह गरेको छ जहाँ उनी २००८ को मुम्बई आतंकवादी हमलामा उनको संलग्नताको लागि खोजिएको छ । ५९ वर्षीय राणालाई भारतले फरार घोषित गरेको छ, जहाँ उनी २००८ को मुम्बई आतंकवादी हमलामा संलग्न भएको आरोपमा धेरै आपराधिक आरोपहरू सामना गरिरहेका छन् जसमा छ अमेरिकीहरूसहित १६६ जना मारिएका थिए । हेललाई भारतको सुपुर्दगीको अनुरोधमा १० जुन २०२० मा लस एन्जलसमा पुनः पक्राउ गरिएको थियो।
यो मुद्दा लाहोर आतंकवादी अदालतबाट इस्लामावाद आतंकवादी अदालतमा सारिएको छ । भारतले हालै २६/११ मुम्बई आक्रमणमा संलग्न आतंकवादीहरूको पाकिस्तानको पछिल्लो सूचीलाई अस्वीकार गरेको छ र पाकिस्तानले हाफिज मुहम्मद सईद र जाकिर-उर-रहमान लख्वी लगायतका मास्टरमाइन्ड र मुख्य षड्यन्त्रकारीहरूलाई स्पष्ट रूपमा हटाएको छ । लख्वीलाई पाकिस्तानको अदालतले जनवरी २०२१ मा सजाय सुनाएको थियो । आतंकवादलाई आर्थिक सहयोग गरेको अभियोगमा पाँच वर्षको जेल सजाय भएको थियो । उनलाई आतंकवादी समूहका लागि पैसा जम्मा गर्ने र तितरबितर गरेको आरोपमा मात्र दोषी ठहरिएको छ । यथार्थमा उनी प्रमुख अपराधीहरूमध्ये एक थिए किनकि उसले आक्रमणकारीहरूसँग उनीहरूको यात्राको क्रममा कुरा गरेको थियो र आक्रमणको समयमा सम्पर्कमा रहेको हुन सक्छ । सुरुमा नाम दिएका २७ जनामध्ये अहिले १३ वर्षपछि ४-५ जनाको मृत्यु भएको छ । प्राकृतिक कारणहरू र बाँकी सेवानिवृत्त र वृद्ध छन् । सुरक्षा चिन्ताका कारण साक्षीहरू पाकिस्तान जान चाहँदैनन् । विकल्पहरु साक्षीहरूको भर्चुअल वयान, पाकिस्तानबाट संयुक्त न्यायिक आयोग भारत भ्रमण गर्ने भनिएको थियो । तर पाकिस्तानले कुनै पनि कुरामा सहमति जनाएको छैन । स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न नमानेको पाकिस्तानल् आजको मितिसम्म २६/११ आक्रमणका लागि कसैलाई पनि आरोपपत्र वा दोषी ठहर गरेको छैन । किनकि यसमा पाकिस्तानको प्रत्यक्ष संलग्नता बाहिर आउने डर उसलाई छ ।
मंसिर १०, २०७८ शुक्रवार ०९:४५:०४ बजे : प्रकाशित
# आतंकवादी हमला